Fleksy Messenger dia misy amin'ny Galaxy Gear 2 | Androidsis
Fleksy dia mandefa ny fampiharana Fleksy Messenger ho an'ny smartwatch Samsung Gear 2
Fleksy te hitondra ny tsara indrindra amin'ny klavinao amin'ny alàlan'ny fampiharana fandefasan-kafatra mankany amin'ny smartwatch Gear 2 avy amin'ny Samsung mba hahafahan'ny mpampiasa te-hifandray amin'ny tanany. Kitendry fitokonana vao tsy ela akory izay ny firaketana ny Guinness ho haingana indrindra manerantany tamin'ny hetsika natao tany New York City niaraka tamin'ny fotoana 18.19 segondra tamin'ny hetsika ofisialy.
Androany i Fleksy dia mandefa Fleksy Messenger ho an'ny Samsung Gear 2 izay tiany hampidirina ao amin'ny ekosistra an'ny fampiharana an'ity smartwatch ity. Fleksy dia iray amin'ireo vahaolana tsara indrindra ho an'ny fanoratana haingana sy mahafinaritra amin'ny alàlan'ny fanoratana amin'ny efijery mikasika mandray mari-pankasitrahana noho ny teknolojia misy azy izay nahavita nanova ny klavierany ho iray amin'ireo safidy tsara indrindra azo raisina ao amin'ny Play Store.
Miaraka amin'ny fampiharana Fleksy Messenger, ny mpampiasa Gear dia afaka mampiasa teknolojia Fleksy mankany mandefasa hafatra amin'ny SMS amin'ny fanamainty anao hanatsara ny zavatra niainanao amin'ny fotoana anoratana azy. Ny app Fleksy no fitendry voalohany hanatevin-daharana ny Samsung Gear 2, mamela ny mpampiasa hiditra amin'ny resaka sy fifandraisana teo aloha na handray hafatra SMS hamaly mivantana avy amin'ny tanany.
Ny fampiharana Fleksy Mifanaraka amin'ny smartphone an'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny fampidirana ny fampahalalana rehetra avy amin'ny fitaovana roa mba hahafahana mampiasa ny haitao mitovy amin'izany ary manoratra haingana fa tsy mandany fotoana.
Loannis Verdelis, mpanorina ary CCO an'ny Fleksy, dia nilaza hoe: «Faly izahay fa niara-niasa tamin'ny ekipa Samsung Gear hitondra fampiharana mahatalanjona amin'ny ekosistia Gear sy ny rafitra miasa Tizen. Ny haitao misy anay dia mamaritra indray izay azon'ny fitaovana azo ampiasaina, ary ny fihetsiky ny mpampiasa amin'ny smartwatches.»
Ny fomba iray karazana miaraka amin'i Fleksy amin'ny faritra somary kely dia afaka ho iray amin'ireo zava-nisongadina noho ny famolavolana keyboard tsy manam-paharoa ary ny fomba faminaniany teny mivantana, hita mazava tsara amin'ny horonantsary navoakan'i Fleksy ho an'io fotoana io. Solony mahaliana ho an'ireo izay efa afaka mankafy ny Galaxy Gear 2.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Fleksy dia mandefa ny fampiharana Fleksy Messenger ho an'ny smartwatch Samsung Gear 2
Ny ohatra voalohany amin'ny sary nalaina tamin'ny Sony Xperia T3